Jo Nesbø: ndụmọdụ 10 sitere n'aka onye edemede Norwegian guzobere maka ndị edemede | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Foto sitere na Magazin K.
Onye edemede Norway Jo Nesbø, nna ukwu nke akwụkwọ akụkọ mpụ nke Nordic, nyere na nyochaa a usoro nke aka maka ndị edemede. Onye okike nke nyocha Harry oghere ma dikwa fun umuaka akwukwo guo nke gi ebe, ụzọ na nkwali mgbe ọ na ede na ihe ọ na-ede banyere. Atụmatụ 10 nke ga-enyere gị aka maka ndị edemede. Ma eleghi anya ndi anyi nwere omume ime ihe ndi ozo kenyeara ya. Ka ahụ.
1 1. Enweghị nkịtị ụbọchị ọrụ
2 2. Dee ebe obula
3 3. Nwee atụmatụ zuru oke
4 4. Banye na akụkọ siri ike
5 5. Jiri ndu gi
6 6. Dee ihe i nwere, ihe i nwere
7 7. Hapu aha n’onwe ya
8 8. Ọrụ kachasị mma anaghị adị ka ọrụ.
9 9. Uche ndagide
10 10. Deturu onwe gi
1. Enweghị nkịtị ụbọchị ọrụ
Ebe Nesbø gua otù ọrụ ike ọrụ na-adịkarị iche dabere na ebe ị nọ. «Taa m biliri na 4 nke ụtụtụ. Agara m ebe na-abụghị nkwari akụ ahụ, coffeeụọ kọfị ma rụọ ọrụ ruo 8. Mgbe ahụ, agara m mgbatị ahụ na họtel wee rie onye nnọchi anya m nri ụtụtụ. M ga-agba ajụjụ ọnụ rue elekere anọ nke mgbede, mgbe ahụ m ga-aga ọdụ ụgbọ elu wee laghachi Oslo. Aga m arụ ọrụ n'ụgbọelu, ikekwe maka awa 4. Ide ihe m na-eme mgbe enweghi ihe ndi ozo. Enweghị m iwu, na m na-eteta dabere na ihe m mere n'abalị gara aga.
2. Dee ebe obula
«M dee ebe nile, mana ebe kachasị mma bụ ọdụ ụgbọ elu na ụgbọ oloko. Mgbe ị nọ ọdụ ụgbọ oloko ma ọ bụ na-eche ụgbọ elu, ị nwere naanị oge pere mpe iji dee. Nke ahụ mere ka ị chee na oge dị oke ọnụ ahịa na ị ga-eji ya mee ihe. Ọ bụrụ na iteta n’ụtụtụ wee sị na ị ga-ede ihe ruo awa 12, ị gaghị eche ya. Ọ na-amasị m ịmara na aga m eme ihe niile m nwere ike ime n'ime naanị awa 1 ma ọ bụ abụọ. "
3. Nwee atụmatụ zuru oke
«Ọ bụrụ na ị nwere akụkọ ọma ị ga-amalite, ọ ga-adị mma n’agbanyeghi otu ị si ede ya.. Achọrọ m inwe obi ike na m maara akụkọ ahụ, na mgbe m malitere ide, edegoro m ya ọtụtụ ugboro. N’ihi ya, enweghị m mmetụta, mgbe peeji mbụ gasịrị, na abụ m onye na-akọ akụkọ, na-akọ akụkọ. Akụkọ a adịlarị, anaghị m eme ya ka m na-aga. Ọ bụ mgbe ahụ ka obi ga-erukwa gị ala ịgwa ndị na-agụ akwụkwọ gị, sị, “Bịaruonụ nso, n’ihi na m nwere akụkọ a dị ukwuu. Ya mere, zuru ike ma tụkwasị m obi. Nke a bụ mmetụta m mgbe m gụrụ ọrụ nke ndị edemede ukwu.
4. Banye na akụkọ siri ike
"Ndị America kachasị mma n'igosi akụkọ ha. Na peeji ole na ole mbụ nke akwụkwọ, ha nwere ụzọ pụtara ìhè isi na-ekwubiga okwu ókè banyere ha. Ọ bụ ọdịnala. John na-achọ ọ na-eme, na Frank Miller, onye edere ihe osise nwere otu uzo o si eme ka ị gbanwee peeji. Ahụrụ m ya n'anya. O nwekwara ike ịbụ ihe ọ bụla ga - eme ka ndị na - agụ akwụkwọ gị chọọ ịgụ ya. I nweghi ike iche maka usoro iwu. Naanị jiri mmetụta ahụ ị nwere na afọ gị. Ọ bụrụ na echiche nke mmalite masịrị gị ma dịkwa ka ihe ịma aka, ị nọ n'ụzọ ziri ezi".
5. Jiri ndu gi
«Ọ dị mma ịkọ site na ahụmịhe nke ndụ n'ezie. Mgbe m dere akwukwo dika Ndị isiM na-eji ụdị ojii ahụ mana m na-ejikwa isiokwu sitere na ndụ m. Emeela m ọtụtụ ihe dị iche iche. Abụ m onye isi na ndị agha ikuku. Ana m eme egwu. Arụrụ m ọrụ dị ka onye na-azụ ahịa ngwaahịa ọtụtụ afọ. Nke a bụ otu m si nweta mmụọ nsọ Ndị isi. Mgbe m bụ onye nyocha gbasara ego, ndị na-achụ nta talent gbara m ajụjụ ọnụ. Ihe na-enyere m aka maka akwụkwọ m bụ na enwere m ndụ, ya mere, enwere m ike ịkọ banyere ndị ọzọ '.
6. Dee ihe i nwere, ihe i nwere
«Ọ bụghị maka ịnwa ide akwụkwọ kacha ere ahịa, kama ọ bụ ide ihe ị nwere. Ọ bụrụ n’inwe obi ụtọ, ị nwere ike ịkekọrịta ịhụnanya nke ịkọ akụkọ n’etiti ọtụtụ ndị na-ege ntị. Amaghị m na akụkọ m ga-erute ọtụtụ ndị na-agụ akwụkwọ. Echere m na ha karịrị ole na ole. N’ihi ya, ọ tụrụ m n’anya mgbe m chọpụtara na m nwere ọtụtụ mmadụ n’ụlọ.
7. Hapu aha n’onwe ya
«Ọ dịghị iwu mgbe a bịara n’isi akwụkwọ akụkọ. Echiche na-abịa n'ụzọ dị iche iche. Na Onye Snowman, akwụkwọ akụkọ ahụ malitere na aha ya. Echere m na ọ dị ka nnukwu aha. Mgbe ahụ ọ bịakwutere m ihe aha ahụ pụtara na akụkọ. Nke ahụ bụ mmalite. N'ọnọdụ ndị ọzọ, ọ bụ ihe ikpeazụ m na - eme ma oge ụfọdụ ọ na - abịara m mgbe m gachara akwụkwọ ahụ. Dịka m kwuru, enweghị iwu. Ndị isi o doro anya n'ihi ihe ọ pụtara abụọ. Ọ bịakwutere m ngwa ngwa.
8. Ọrụ kachasị mma anaghị adị ka ọrụ.
«Ọrụ m ide akwụkwọ bụ ihe m ga-eme n'efu. Fọdụ ndị edemede kachasị mma ọ bụghị naanị na Norway, kamakwa ụwa ndị ọzọ, ga-enwe ọrụ ndị ọzọ na-abụghị ide. Ma nye ọtụtụ ndị, ịrụ ọrụ bụ oge kachasị mma mgbe ha na-eme ihe ha chọrọ ime.
9. Uche ndagide
«Ọ́ bụrụkwanụ na m zuru akwụkwọ ndị ọzọ? Chọpụta. Ọ bụrụkwa na m bụ onye ohi, m nwere ike ịgwa gị na m na-ezu ohi mana enweghị m ike ịgwa gị onye ọ bụ. Ọ dị mma, a Mark Twain. Tom Sawyer na Huckleberry Finn. Ndị ahụ bụ nnukwu akwụkwọ na agwa. N'ihi na m na-ede bụ a mmeghachi omume na-agụ. Ọ bụ otu ihe ahụ ị na - eme mgbe gị na ndị enyi gị nọ na tebụl. Otu onye ga-akọ otu akụkọ, onye ọzọ akọọ onye ọzọ, nke ọzọ emechaa. Ya mere, ị ga-agwa ihe ọhụrụ kwa. M tolitere n’ime ụlọ ebe m nwere ọmarịcha ahụmahụ dị ka ndị na-ege ntị na ndị na-agụ ihe.. Ugbu a bụ oge m ".
10. Deturu onwe gi
«Mgbe m na-ede ihe, ana m eche n’otu onye na - agụ ya, onwe m. Maka m, ide ihe abụghị maka ileta ndị mmadụ, ọ bụ maka ịkpọ ndị mmadụ oku n’ebe ị nọ. Nke ahụ pụtara na ị ga-ama ebe ọ dị. Mgbe ị rutere n'okporo ụzọ, ọ bụrụ na ị na-eche banyere ebe onye na-agụ ya ga-achọ ka ị gaa, mgbe ahụ ị ga-efu. Have ga-ajụ onwe gị ihe ga - eme ka ị bilie echi wee mechaa akụkọ ahụ. Oge ụfọdụ akụkọ a ga-egosi ntụzi aka, mana n'ezie, ọ bụ gị ka ọ bụ onye edemede na-ekpebi. Mana, oge ndị ọzọ ọ bụ akwụkwọ n’onwe ya nwere ike idu gị, onye bi naanị ya.
Isi mmalite: foxy na-awagharị
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ndị edemede » Jo Nesbø: ndụmọdụ 10 sitere n'aka onye edemede Norwegian guzobere maka ndị edemede